XOG+DAAWO: Maxay Puntland uga aamusan tahay arrimaha Jubbaland ka socda?
GAROOWE(P-TIMES)- Falanqeeyaasha Siyaasadeed ayaa ilgaar ah ku haya dhaqdhaqaaqyada iyo aamusnaanta Xukuumadda iyo baarlamaanka Puntland ay ka aamusan yihiin arrimaha doorashooyinka ee Jubbaland, xili ay dhinacyo badan isku kaashanayaan sidii ay u burburin lahaayeen nidaamkaas, oo ay horey Puntland waqti badan u galisay sidii ay u dhisi lahayd.
Liiska baarlamaanka cusub oo xalay lasoo saaray, ayaa wararku sheegayaan in aysan guddoonka baarlamaanka Puntland dooneyn in ay hambalyo u diraan, taasi waxay ka dhigan tahay arrimo waa weyn oo gudaha Puntland ka jira.
Warar hoose ayaa sheegaya in guddoonka baarlamaanka inta badan ay aamisan yihiin fikradaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, taasna ay keeni karto in ay ka gaabsadaan wax aysan raali ka aheyn Xukuumadda Federaalku.
Mawqifka Xukuumadda Puntland ayaa la sugayaa, iyadoo horey u diiday in faragalin lagu sameeyo arrimaha doorashooyinka ee Jubbaland, balse ma jirto wax dhaafsan arrimahaas, iyadoo ilaa hadda aysan ka hadlin arrimaha baarlamaanka cusub.
Puntland ayaa hormuud ka ahayd dhismihii Jubbaland, waxayna dhaqaale badan iyo dadaal diblumaasiyadeedba ku bixisay sidii meelmar looga dhigi lahaa qorshaha dhismaha Jubbaland, iyadoo ay aad iskugu qabteen Madaxda dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.